Shirkadda Snap Chat Oo Soo Bandhigtay Kor U Kac Ay Samaysay Sannadkii 2017-kii.
Sunday February 11, 2018 - 22:05:32 in Wararka by Super Admin
Hargeysa(Halgan)Shirkadda Snap Chat oo ah shirkad dhowaan kusoo korodhay suuqyadda adduunka ayaa markii ugu horeysay soo bandhigtay horumarka ay ka samaysay dhinaca suuqyadda caalamiga ah.
Waxaanay shirkaddu sheegtay in ay faa’iido badan ka qabatay suuqyadda caalamka sannadkii ina dhaafay, iyada oo ay lacagtaasi ka heshay xayeysiis fara badan oo ay ka heshay shirkaddo waaweyn.
Lacagaha ay shirkaddani heshay ayaa kor u kacay 30% sannadkii ina dhaafay ee 2017-kii, iyada oo xoog usoo gashay suuqyadda caalamka .
Agaasimaha shirkadaasi oo lagu magcaabo Ivan Spiegel oo u waramaayey wargeyska Telegraphy oo uu wargeyska DAWAN kasoo xigtay qormadan ayaa sheegay in shaqadoodii sannadkii 2017-kii ay noqotay mid keentay in aanay ka cabsan inay khasaaraan , sidoo kalena ku dhiirigelisay guulo is daba joog ah oo ay gaadhaan.
Sidoo kale shirkadda ayaa war bixin ay soo saartay ku sheegtay in ay kor u kaceen dadka isticmaalaa Program-kaasi Snap Chat-ka , kuwaas oo ka hor sannadkii 2017 ahaa 5.05% , waxaanay tiro ahaan ahaayeen 178 Million oo qof.
Sannadkii ina dhaafay ayaa warbixintan lagu sheegay inay noqdeen dadka isticmaalaa 8.9 Million oo cusub, kuwaas oo dhan 187 Million oo qof, kuwaas oo kala jooga daafaha adduunka, waxaanay dadkaasi kusoo biireen saddexdii bilood ee ugu dambeeyey.
Shirkadda ayaa sheegtay in ay soo xeraysay lacag dhan $285.7 Million , inkasta oo ay sheegeen in ay khasaareen lacag kale oo dhan $350 Million , waxaan lagu sheegay shirkadaasi qoraalka ay soo saartay in ay sannadkii tegey ka wanaagsanaayeen sannadihii hore.
Barnaamijkan ay dadku isticmaalaan ee lagu shubo Mobiles ka ayaa noqday waayadii ugu dambeeyey mid aad loo isticmaalo, iyada oo lagu sameeyey dib u habayn weyn, waana ta keentay in uu helo suuq aad u weyn iyo isticmaaleyaal cusub.